Puntland oo sheegtay in dadka ugu badan ee masiibada wax ku noqday ay yihiin caruur iyo waayeel – Radio Daljir
Nofeembar 14, 2013 2:24 b 0
Garoowe, November 14, 2013 – Dowladda Puntland ayaa gargaarkii ugu horeeyey gaarsiisay deeganada ay ka da?een roobabka ?Tropical rain?, halka weli qaar kale ay ku go?doonsan yihiin deeganadu roobabka badan ku hooreen.
Wasaaradda arrimaha gudaha ee Puntland ayaa sheegtay in gargaar kala duwan oo laga keenay Boosaaso la gaarsiiyey deegaano ku dhow tuulada Qarxis ee gobolka Nugaal, halkaas ka mid ah meelaha ugu daran ee dadku ku go?een intii roobabku socdeen.
?Gurmadka waxaa laga keenay Boosaaso, waxaa soo dhiibay dadka magaalada oo iska aruuriyey.? Ayuu yiri Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Ilka-jiir
Wasiirka arrimaha gudaha ee Puntland Cabdulaahi Axmed Jaamac, waxaa uu sheegay in gargaarka dadka loo qabiyey, isla markaasna uu yahay gurmadkii ugu horeeyey ee la geeyo meelaha ay dhibaatooyinku ka dheceen.
?Dadka ugu badan ee dhintay intii roobabku socdeen waa caruur ka yar 7 sano iyo dad waa wayn oo waayeel ah.? Ayuu yiri wasiirka oo ka hadlay nooca dadka ugu badan ee roobabku dileen.
Puntland waxay sheegtay in ay jiraan weli dad iyo xoolo ku go?doosan meelaha ay biyuhu ku jiraan ee aan la geli karin, taas oo khatar ku wayn ku ah nolosha dadka reer miyiga ah ee gurmadka loo fidin lahaa.